Faallo: Qarax aan joogsan, wadooyin xiran iyo saraakiil loo dalacsiiyay waxqabadka Amniga. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Faallo: Qarax aan joogsan, wadooyin xiran iyo saraakiil loo dalacsiiyay waxqabadka Amniga.
Faallo: Qarax aan joogsan, wadooyin xiran iyo saraakiil loo dalacsiiyay waxqabadka Amniga.
Magaalada madaxda Soomaaliya ayaa waxa ay ladaala dhacaysaa qaraxyo iyo weeraro qorsheesan oo ay ka fuliyaan Al-Shabaab, waxaana mar waliba dhibta ugu badani ay soo gaartaa dadka shacabka ah ee kudhaw goobaha labar-tilmaameedsado. Hay’adaha ammaanka ayaa xeray isgoysyada dhanka koonfureed kasoo jira wadada wadnaha iyo goobo kale oo muhiim ah kadib weeraro aan laga nasan oo shabaabka ay ku qaadeen xarumo dowladeed, hoteelo iyo goobo isku imaatan oo ay kamid yihiin maqaayadaha kudeedsan laamiga.
Isgoysyada hay’adaha ammaanku xireen oo aan marnaba qofka shacabka ahi usuuragelin inuu soo gudbo ayaa hadana waxa magaalada kadahcaya qaraxyo iyo weeraro qorshaysan, haba ugu badnaadaane kooxaha bastooladaha wata oo beegsada saraakiisha iyo shaqaalaha dowlada walow ay aad u adagtahay in laxakameeyo kooxahaas marka loo eego gawaraadida qaraxa laga soo buuxiyo.
Goobkasta oo aad magaalada kamarto waxa socoda ciidamada dowalada hadana waxa jira habacsanaan dhanka ammaanka ah. Dowlada Soomaaliya kuma yara ciidan, balse waxaa jirin askar ku qanacsan mushaarka ay qaataan oo ah boqol doolar taa oo ay usii dheertahay inay waayaan musaharkooda mudo bilo ah taasi oo keeni karta amni xumo. Marka laga soo tago goobaha hay’adaha ammaanka xereen ee ah isgoyada wadada wadnaha dhanka koonfureed kaaga beegan, hadana waxaa jira dadaalo ciidamda ay wadaaan kuwaasi oo lagu baacsanayo laguna baadi goobayo xubnaha Al-Shabaab katirsan ee ku dhuumaaleesanaya Muqdisho.
Ciidamad booliska oo howgalo kasameeya magaalada ayaa hadana inta badan soo xera dhalinyado ubadan arday walow mararka qaar laga dhax helo xubno katirsan Al-Shabaab. Hay’adaha ammaanka uma taagwaayin sugida xaafadaha kasokeeya baraha koontorool oo ay ciidamadu xereen balse waxa jira isul xilsaarid la’aan iyo baaritaano joogta ah oo ciidamdu kasameeyaan xaafadha qaar ee katirsan goobaha ufasaxan isukala gooshidda ee dhanka koonfureed kaxiga wadada wadnaha. Qaraxyadan iminka kadhacaya muqdisho xili wadooyinku xeranyihiin ayaa suuragal ah in lagu sameenayo xaafadaha kasookeya goobaha xeran, waxana arinkaasi oo dhan lagu xaqiijin karaa baaritaano joogta ah oo ciidamada ammaanku sameeyaan.
Inta ciidamada dowalda ay kafakarayaan siday usigi lahaayeen amniga caasimada muqdisho ayay hadana Al-Shabaab u fakarayaan siday weeraro uga geesan lahaayeen magaalada, waxana adag si lagu joojiyo weerarada ka imaanaya dhanka Al-Shabaab.
Hadii lahelo ciidamo mushaar wanaagsan oo joogta ah qaato waxaa dhici kara isbadel dhanka ammaanka ah taas oo keeni karta xasilooni ka hirgasha caasimada Muqdisho. Marka ciidamada dowalada loo barbardhigo kuwa AMISOM, waxa aad u taya badan kuweena balse waxa mushaar badan kuwa AMISOM oo shaqsigiiba uu qaato lacag garaysa kun doolar. Hadii lacagtaasi lasiiyo laba askari oo min shanboqol qaata waxa ay sugi karaan amaanka iyaga oo aad ugu niyad wanaagsan mana dhici doonto gaari qarax wada oo soo gudba iyo askari shaxaad waydiista shaqsiga uu baarayo.
Waxan ku soo af meerayaa faaladaydan inyar oo kamid ah ra’yigayga taas oo ah in saraakiisha ammaanka inay wax badan kabadalaaan qaabka amniga loosugo, dad badan ayaa kacabanaya inay usoo gudbi waayaan xaafadahooda kuwaa oo lagu celiyo baraha koontorool ee police-ku kasameesteen muqdisho. Waxa ila haboon in gaariga labaaro, lahubiyo halka uu usocdo, iyo shaqsiga wata inuu yahay shaqsi degen xaafada uu sheegaty, kadibna lafasaxo isaga oo amaankiisa iyo qarataha uu geesan karo laga hortagay. In laamaha amaanku geeyaan goobaha baarista ciidamo aad u diyaarsan oo aqoon uleh baarista iyo gaadiidka iyo goob loogu talagalay in lagu baaro gaariga oo kafog halka ay gawaarida kale safka uga jiraan, taas oo kahortagaysa in laga feeejignaado dhibaato ka timaada gawaarida safka ku jirta.
W/Q: Abdirizack Dhore
Previous articleMaxaa dib u dhigay Doorashada Galmudug?
Next articleDEG DEG: Qatar iyo qaraxyada Muqdisho, weerarka Farmaajo iyo hanjabaada Axmed Madoobe